Napalm မှ လက်ပန်းတောင်းသို့…. | MoeMaKa Burmese News & Media
10 Responses to Napalm မှ လက်ပန်းတောင်းသို့….
U Aye on December 5, 2012 at 8:18 am
U THEIN SEIN IS MOST RESPONSIBLE PERSON FOR THAT CASE. TAKE IMMEDIATE ACTION TO THE ONE WHO GIVE ORDERS TO DO SUCH CRUEL THINGS.
စိမ်း on December 5, 2012 at 9:54 am
သမ္မတက မီးလောင်ဗုံးမသုံးခိုင်းပဲ သုံးမိလို့ကတော့ တိုင်းမှူး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကစပြီး တာဝန်ရှိသူတွေ တစ်ထွေးကြီး ပြုတ်ယုံတင်မက ထောင်တောင် ကျသွားဦးမယ်။ အခု ဦးသိန်းစိန်ဒီကိစ္စကို မရှင်းပဲ ဝှေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်နေတာ သဘောပေါက်တော့ပေါ့ဗျာ။ အခု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဆိုတာကလည်း မစစ်ဆေးခင်ကတည်းက ထွက်နေတဲ့ လေသံတွေကို နားထောင်ကြည့်လေ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မုံရွာဟောပြောပွဲတွေ နားထောင်ကြည့်ပါ။ ထွက်လာမယ့်အဖြေကို ကြိုသိနေပြီပဲဗျာ။
သပိတ်စခန်းဖြိုခွဲတဲ့ မီးလောင်ဗုန်းပြဿနာကလည်း အစိုးရအဖွဲ့ထိပ်ပိုင်းက ခိုင်းတယ်ဗျာ။ သူတို့ အမိန့်ပေးတဲ့အတိုင်း ကွက်တိမဖြစ်ရင် အလုပ်ဖြုတ်၊ ထောင်ချပေါ့.. သိပ်ရှင်းနေတာကို မလုပ်ဘဲ၊ နားရွက်ပတ်ကိုင်ပြီး အချိန်ဆွဲနေတာ ရုပ်ဆိုးလွန်းပါတယ်ဗျာ။
U Win Maung on December 5, 2012 at 11:11 am
Ledi Sayadaw preached in advance to classify `yote` and `nan` clearly in that area.`yote` is `wanbao` and`nan` is `skin burns smell of sanghas.
မောင်ပျာလောင် on December 5, 2012 at 11:34 am
ဦဖိုးထက်ရဲ့ Napalm မှ လက်ပန်းတောင်းသို့….ကိုဖတ်ပြီး Napalm ဗုံးဆိုတာ တော်တော်ဆိုးပါလား ဘယ်တုံးကပေါ်လာ
တာလည်းဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်လူတပ်ကြီးလုပ်ပြီး (ဦးဖိုးထက်ရေးထားတဲ့အတိုင်း) လှည်းတန်းဈေးရှေ့ ကလက်ဖက်
ရည်ဆိုင်မှာ ကျနော်အာလုပ်သံပေးနေတုံး ပညာယှီဘဘကြီးရောက်လာပြီး – ဟေ့ – ငပျာလောင် ဘာတွေအာချောင်
နေတာ လည်း ဆိုပြီးပြောလိုက်မှ ကျနော် အကယ်ဒမီမရခင် မျက်နှာကလေးနဲ့ အသာထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ ဘဘကြီး
စပြောပါပြီ – သူတို့ လူပျိုပေါက်လောက်တုံးက Objective Burma (ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကာစ) စစ်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုမှာ
စစ်လေယာဉ်ပေါ်က မြန်မာပြည်ပေါ် Napalm ဗုံးတွေအတွဲလိုက်ကျဲချတာ သူမြင်တွေ့ ဘူးတယ်တဲ့ ။ ဟုတ်ပါ့မလား
ဘဘကြီးရယ်လို့ မေးလိုက်တော့။ အော်မင်းက မယုံဘူးလား – လာလိုက်ခဲ့ ဆိုပြီးသူ့ ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်ကိုခေါ် ပြီးပြတယ်၊ အဲဒီ့မှာဖတ်ကြည့် ဆိုပြီး ထောက်ပြတော့ (မောင်ပြာလောင် အင်္ဂလိပ်စာမှမတပ်ဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ လက်ရေးနဲ့ တော့
ကူးတပ်ထာကြောင့်) ကူးပြီးဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ မိုးမခ စာဖတ် ပရိဿကြီးနဲ့ဦးဖိုးထက် တော့နားလယ်ပြီး
့The World Book Encyclopedia N~O volume 14 Page 10
NAPALM isajellied gasoline used in war. A napalm bomb dropped from the air busts, ignites, and splatters burning napalm overawide area. The jellied gasoline clings to everything it touches, and burn violently. Napalm causes death from burns or suffocation. Napalm is also used in flame throwers that are carried by ground troops. Napalm was used in World War II, the Korean War, and the Vietnam War.
The word Napalm comes from the two basic ingredients of the white, grainy powder used in the gasoline. Na stands for the naphthenic acid, and palm for the cocoanut fatty acids.
လို့ ဆိုထားတာကြောင့် မင်းငါပြောထားတာယုံပြီလား လို့ ဘဘကြီးက မေးတယ်။
အဲဒါတော့ တပြည့်တော်လည်း မလျှောက်ပါ၊ ချေထောက်နာနေလို့ ပါ ဘုရားလို့ ဘဲပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ် – – –
mgoogyaw on December 5, 2012 at 4:56 pm
Now,we can learn from “Ko Pho Htet” and”Mg Pya Laung”, both of you thank you..Good to have that knowledge,about that so called Smoke Bomb,or Tear Gas Bomb,from Government side.Is it True ???
green on December 5, 2012 at 5:16 pm
‘ အင်တာနက်မှာ ဆက်ပြီး ရှာရင်း၊ ဖွေရင်းနဲ့ ဗွီဒီယို Clip လေးထဲက ချာတိတ်မလေးက Nalpm ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးမှန်း သိလာရတယ်။ သူ့ကို အစွဲပြုပြီး အဲဒီ ဗုံး အမျိုးအစားကို မြန်မာလို ပြုလိုက်တော့ နဗန်းဗုံး ဖြစ်သွားခဲ့တယ် ထင်ပါရဲ့”
Please allow me to changeamistake in your article. Napalm is NOT the name of the girl who was the victim of this bomb.
Napalm isathickening/gelling agent generally mixed with petroleum orasimilar fuel for use in an incendiary device, primarily as an anti-personnel weapon. “Napalm” isacombination of the names of two of the constituents of the gel: naphthenic acid and palmitic acid.
win on December 6, 2012 at 6:47 am
If the bomb is made in Ka.Pa .Sa(heavy industery),dont trust the bomb.Smoke bomb can became မီးလောင်ဗုံး.Thats the Ka Ps Sa fault.Some motor bombs explode inside motor.Some rockets droped in at sky because of wet powder because these r made in Ka Pa Sa.
witmone on December 6, 2012 at 6:18 pm
ဒီကနေ့ သတင်းမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန် သြစတြေးလျားခရီးကိုတောင် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ် ဆိုတော့၊ ဒိကိစ္စ (နဗန်းဗုံး)ဟာ မြန်မာ့အစိုးရသစ်ရဲ့ အာဏာလွန်ဆွဲပွဲကြီးတခု အတွင်းမှာဖြစ်နေတယ်… ဦးသိန်းစိန်အဖွဲ့ အနိုင်ရဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ၁၉၆၂က ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို ချေမှုန်းဖို့မီးစိမ်းပြလိုက်တဲ့ ဦးနေ၀င်းကြောင့်၊ ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်စက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၀င်ပေါက်မှာရှိတဲ့ မြေခဲများပြိုကျနေတဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦးနေရာကို သတိရပါတယ်။
ဗီယက်နမ်လူမျိုးများဟာ သူတို့ကို အနိုင်ကျင့်တဲ့ အမေရိကန်များကို ယခုတိုင် မျေကနပ်ကြပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ဗီယက်နမ်များ ကမ္ဘာ့ရေစီးကြောင်း စီးပွားရေးနလံထူလာရေးအတွက် အမေရိကန်ကို ပေါင်းဖက်ရပါတယ်။ တရုပ်များ အနိုင်ကျင့်မှုကိုလည်း ဗီယက်နမ်များ မကျေနပ်တော့ အခုဆို ဗီယက်နမ်မှာ တရုပ်စီးပွားရေးများ(အစိုးရဖက်စပ်ကလွဲရင်) မရှိသလောက် ဖြစ်နေပါတယ်။ ရက်စက်တဲ့ ပြည်ပ တရုပ်၊အမေရိကန်များကို ဗီယက်နမ်များ ညီညွတ်စွာ တွန်းလှန်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလည်း တရုပ်၊ အမေရိကန်များ ရောက်လာရင် …ဗီယက်နမ်လိုပဲ အနိုင်ကျင့်ဦးမှာပဲ။ အခု ပိုဆိုးတာက တရုပ်က ကိုယ်တိုင်ရက်စက်စွာ မလုပ်ပဲ .. အသားထဲကလောက်ထွက်တဲ့ ဒီ စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းများကို အသုံးချပြီး မီးလောက်ဗုံးနဲ့ ရက်စစက်စွာ အင်အားသုံးချေမှုန်းလိုက်တယ်..
တရုပ် ၀ိသမလောဘ စီးပွားသမားများကို ဘယ်လိုခုခံမလဲ… လက်ရှိအစိုးရသစ်ကို မထောက်ခံချင်တော့ဘူးလား၊ မထောက်ခံရခြင်းဟာ ဘာကြောင့်လဲ၊ ၀န်ကြီးမလုပ်ရလို့လား…၊ အစိုးရသစ်လုပ်ပြနေတာတွေက မကျေနပ်ရင်၊ ဘယ်သူသမ္မတလုပ်မလဲ…။ လက်ပန်းတောင်အရေးအခင်းက တရုပ် ၀ိသမလောဘသားများရဲ့ လက်ချက်ဆိုတာ သိပြီး၊ တရုပ်ကိုလက်ခံတဲ့ လက်ရှိခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကို အရင်အနားယူခိုင်းရပါမယ်…။ ၀န်ချတောင်းပန်ပါ..။
မောင်ပျာလောင် on December 7, 2012 at 5:26 am
၀တ်မှုံ ရဲ့ သုံးသတ်ချက်တွေက တန်ဘီုးရှိလှတယ်။ မီးမလောင်ဘဲ မီးခိုးမတွေ့ နိုင်ဘူးလို့ဂျပန်စကားပုံရှိတယ်။
ကြံဖွတ်အစိုးရ၀ိုင်းထဲမှာ မီးလောင်နေပြီ။ သမတ မီးညှိမ်းဘို့ လုပ်နေတယ်၊ ဘီဘီစီ သတင်းထဲမှာလည်း အမေစုကို
ကော့မှူးမှာ အပြတ်အသတ်ရှုံးသွားတဲ့ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး (ဆရာဝန်) ကလည်း နဗန်းဗုံးကိစ္စ မီးညှိမ်းအောင်လုပ်နေတယ်။ သူတင်မကဘူး မန္တလေးဆေးရုံအုပ်ကြီးကလည်း ဇွတ်မသိဘူးလို့ ငြင်းနေတယ်။ သူတို့ မီးသတ်နေပုံက – ဇွတ်အတင်း
လိမ်ရင်း ရေနဲ့ လောင်းနေပုံရတယ်။ မှားသွားပြီ သမတ လူကျန်းအဖွဲ့ ခင်ဗျား၊ နပန်းဗုံး ဆိုတာ ရေနဲ့ လောင်းလည်း၊
ဆက်လောင်တာဘဲခင်ဗျား – – – ။ ဆရာဝန်ကြီးများ နိုင်ငံရေး မီးလောင်ဗုံးကြီးအောက်မှာ မနေခြင်ကြပါနဲ့ ၊ နိုင်ငံခြားမှာ
ဆရာဝန်ပညာနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ မြန်မာဆရာဝန်တွေဟာ အများကြီးပါ။ ပြည်သူ့ ဘက်က ရပ်တည်ပြီး ကြံ့ဖွတ်
နလဘိန်း ဗုံးကြီးကို ပိုက်မထားပါနဲ့ - – – ။ ကော့မှူးက ဆရာဝန်ကြီး သမီးကလေးပြန်လာရင် မြေးကလေးပါ ပါလာပါစေလို့ - – – ၊ အော်ဒါနဲ့အမြဲတန်းမှုန်ကုတ်ကုတ်တဲ့ Charles မင်းသားတောင် မြေးကလေးရတော့မယ်ဆိုလို့ 
ပြုံးနေလိုက်ထာ – ငါးခူကတောင် အရှုံးပေးပါပြီတဲ့။ ဆရာဝန်ကြီးလည်း သမီးကလေးပြန်လာပြီး ဘိုးဘိုး ဆရာဝန်ကြီး
ကိုစော်ကားတာ မဟုတ်ပါဘူး လို့ မော်ဒယ်ဂဲ မြေးမလေးက ပြောလိုက်ထာ – မောင်ပျာလောင် မြင်ခြင်စမ်းပါဘိနော် –
ငါ့မြေးချော – ရေမရောဆိုပြီး ကပြလိုက်စမ်းပါ – ကော့မှူးက ဆရာဝန်ကြီးရယ် – ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ – – –
NYEIN CHAN AYE on December 7, 2012 at 12:03 pm
@ Writer, Just For Your Information!
One of the victims of US’s aerial napalm attack,aVietnamese naked girl’s (whose photo had won the Pulitzer Prize) name is “Phan Thi Kim Phuc” who now resides in Canada.
“Napalm” isatechnical term,acombination of two acid names, which is highly flammable.